एनआरएन लघुवित्तले ठुलो संख्यामा कर्मचारी माग्यो, एसएलसी पासलाई पनि अबसर
काठमाडौं । एनआरएन लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले विभिन्न ९ वटा पदका लागि निवेदन माग गरको छ । विस्तृत सुचनामा हेर्नुहोस्..
रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्समा रोजगारीको अबसर
काठमाडौं । रिलायवल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सुचना प्रकाशन गरी कर्मचरी माग गरेको छ । कम्पनीले रिजनल म्यानेजर, ब्राण्ड अफिसर र ब्रान्च म्यानेजर÷मार्केटिङ एजुकेटिभको माग गरेको हो । रिजनल म्यानेजरको लागि मास्टर्स..
अब सरकारी जागिर खाने उमेर ३५ बाट घटाएर २८ वर्षमा झार्न सांसदको प्रस्ताव
काठमाडौं । लोक सेवामा जागिर खानका लागि अहिले कायम रहेको ३५ वर्षको उमेरहद घटाएर २८ वर्षमा झार्न एक सांसदले प्रस्ताव गरेका छन् । संघीय निजामती ऐन विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा..
करीब १२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करीब १२ हजार शाखा अधिकृतको समायोजन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करीब १२ हजार शाखा अधिकृत समायोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता..
विश्वका उत्कृष्ट दश शहरभित्र काठमाडौँ पनि, अरु कुन देशका शहर परे ?
काठमाडौँ। नेपाल र नेपालीका लागि एउटा खुसीको खबर छ । विश्व प्रसिद्ध लोन्ली प्लानेटले विश्वका घुम्नलायक विश्वका उत्कृष्ट दश शहर मध्ये काठमाडौँको नाम समेत समेटेको छ । यसले नेपालमा पर्यटक..
कति विदेशीले काम गर्छन नेपालमा ? १ वर्षमा ११६३ लाई श्रम इजाजत
काठमाडौं । श्रम, रोजगारत तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १ वर्षमा विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत १ हजार १६३ जना विदेशी श्रमिकहरुलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले ९०८ जना विदेशी श्रमिकहरुको..
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नतिजा आयो, को को सिफारिस भए ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नको लागि गरेको विभिन्न विज्ञापनहरुको लिखित र अन्तरवार्तामा सहभागि उतिर्णहरुको नतिजा प्रकाशन गरेको हो । को कसको नाम सिफारिस भयो नियुक्तीका लागि ? थप..
रोजगारी विदेश जाने ३९ प्रतिशतले घटेपनि कसरी बढ्यो ३० प्रतिशतले रेमिट्यान्स ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा ३०.२ प्रतिशतले बढेर पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब..
सरकारले सकेसम्म काम दिने, नसके २२,४१६ रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता दिने
काठमाडौं। सरकारले पाँच वर्षभित्रमा बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्यको लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। बेरोजगार युवालाई वर्षमा कम्तिमा..
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आजदेखि शुरु, कसले कसरी पाउँछन् ‘बेरोजगार’ भत्ता
काठमाडौं । सरकारले आज बुधबारदेखि ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’को लागू गर्दैछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको हो। ‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ नारा..
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नतिजा आयो, को-को सिफारिस भए ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका लागि लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । आन्तरिक बढुवा र खुला प्र्रतिस्पर्धाको नतिजा आएको हो । को कसको नाम सिफारिस भयो..
रोजगार संयोजक पदका लागि २२ सय ५९ जना सर्ट लिस्टमा, हेर्नुहोस् क-कस्को नाम निस्कियो ?
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा नियुक्त गर्न लागेको रोजगार संयोजकका लागि २ हजार २ सय ५९ जना सर्टलिष्ट तयार गरेको छ..
अधिकृतमा बढुवा हुन स्नातक तह उत्तीर्ण अनिवार्य
काठमाडौँ। अब स्नातक तह उत्तीर्ण नगरी बढुवाबाट अधिकृतस्तरमा पुग्न नसकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा..
नेपाल टेलिकमद्वारा लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, क–कसको निस्कियो नाम ? (नामावलीसहित)
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले खुलाएको विभिन्न पदको विज्ञापनमा लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सफल उम्मेदवारलाई टेलिकमले अन्तर्वार्ताको तीन दिनअघि नै कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयस्थित पदपूर्ति सचिवालयमा सम्पर्क..
बेरोजगारलाई भत्ता कार्यक्रम फागुन १ गते घोषणा हुँदै, यसरी दिइन्छ भत्ता
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुरूवात गर्ने भएको छ । मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार..
अब विद्यालयको शिक्षक हुन विषयगत लाइसेन्स अनिवार्य, छिट्टै विज्ञापन
काठमाडौं । विद्यालय तहको शिक्षक हुनका लागि अब अनिवार्य रूपमा विषयगत शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) हुनुपर्ने भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले यसअघि तहगत रूपमा लिँदै आएको लाइसेन्स परीक्षालाई सुधार गरी विषयगत..
काठमाडौं । सरकारले केही नेपाल ऐनमार्फत् बोनस ऐनमा संशोधन गर्दै कम्पनीहरूमा बोनस बाँडेर बचेको रकम सिधै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव संसदको कानुन समितिले उल्टाइ दिएको..
काठमाडौं । सरकारी सेवामा रहेका वा नरहेका कर्मचारीहरुले सरकारको आलोचना गर्न नपाउने भएका छन् । साथै आफू सेवामा रहँदा प्राप्त भएका सूचनालाई सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुलाई बन्देज गरिएको छ । संघीय..
अब सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण कोटा हटाईने
काठमाडौं । सरकारी सेवामा खस आर्यको आरक्षण नराखि संघीय निजामती सेवा विधेयक तयार पारिएको छ । संविधान र निर्वाचन कानुनमा खस आर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, संघीय निजामती सेवाको..
पर्यावरण मैत्री पाँच तारे होटल थपियो, ‘सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर’ बन्यो नेपालको सातौँ पाँचतारे होटल
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा सञ्चालित ‘सोल्टी वेस्टेण्ड प्रिमियर’ होटलले पाँच तारे होटलको मान्यता पाएको छ ।वासुदेवपुरमा एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको उक्त होटलले पर्यटन विभागबाट हालै पाँचतारेस्तरको प्रमाणपत्र पाएको हो । विभागले..
काठमाडौं । अधिकृत स्तरबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेले अब सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने भएका छन्। अधिकृतस्तर भन्दा मुनि राजपत्र अनङ्कित पदमा पनि एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा..
खुला विश्वविद्यालयले माग्यो प्राध्यापकदेखि कार्यालय सहायकसम्मका कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले विभिन्न पदमा दर्खास्त आह्वान गरेको छ । प्राध्यापकदेखि कार्यालय सहायकसम्मका पदमा आवेदन खुला भएको हो । करार सेवामा पदपूर्तिका लागि आह्वान गरिएको दर्खास्तमा सूचना जारी भएको..
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नतिजा आयो (नामावलीसहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा आएको हो । थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोस् । ..
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले विभिन्न पदमा कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मेनेजर लेभलमा ६ जना, अफिसर लेभलमा ४२ जना र सहायक लेभलमा ५७ जना..
नेपाली सेनामा जागिर खुल्यो (सूचनासहित)
काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा जागिर खुलेको छ । त्रि-चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन महाशाखा, नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्ड र ईपिसेन्टर कार्यालयमा रिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रका पदमा आवेदन खुलेको..
बढी भाडा असुल्छन् सार्वजनिक यातायात, टिकट नदिएपछि बढी असुल्न छुट !
काठमाडौँ। कानुनी रुपमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा यात्रुले टिकट पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ मा..
जिरी जाँदा होटेलमा ५० प्रतिशत छुट पाईने
जिरी । दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरी भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई होटलका कोठा भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । बुधबारदेखि लागू हुने गरी होटल व्यवसायीले जिरी भ्रमणमा आउने पाहुनाका लागि..
आजदेखि रेष्टुरेन्ट र बारमा १० प्रतिशत सस्तो हुने, सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित रेष्टुरेन्टहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क खारेज गरेका छन्। रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको संस्था रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले सोमबारको बैठकबाट सेवा शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो। व्यापार तथा..
२० हजार कर्मचारी माग गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी फागुनभित्र करिब २० हजार निजामति कर्मचारीको माग गरिने बताएका छन् । नेपाल यातायात महिला चालक समूहद्वारा आयोजित प्रमाणपत्र वितरण तथा..
काठमाडौं । सरकारले गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले उद्योगका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकास दिने निर्णय गरेको हो । अवकास बापत पाउने सुविधा दिनुअघि..
Results 845: You are at page 8 of 29